Ndi otu ederede | Njem zuru oke
Absolut Viajes bụ ebe nrụọrụ weebụ Actualidad Blog. Anyị website raara nye ụwa nke njem na ya anyị na-atụ aro ebe mbido mgbe anyị bu n'obi ịnye ozi na ndụmọdụ niile gbasara njem, ọdịbendị dị iche iche nke ụwa na onyinye kachasị mma na ndị njem nleta.
Ndị otu nchịkọta akụkọ nke Absolut Viajes bụ ndị mejupụtara omiiko njem na globetrotters nile di iche iche obi dị gị ụtọ ịkọrọ gị ahụmịhe ha na ihe ọmụma ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso na ya, egbula oge dere anyị site n'ụdị a.
Kemgbe m dị obere, o doro m anya na ihe m bụ ịbụ onye nkuzi. Asụsụ abụrụwo mgbe ike m, n'ihi na ọzọ n'ime nnukwu nrọ na-abụ ma ọ bụ, ịga gburugburu ụwa. Maka na ịmara akụkụ dị iche iche nke ụwa, anyị jikwaa ịmụtakwu gbasara omenaala, ndị mmadụ na onwe anyị. Itinye ego na njem na-eji oge anyị!
Enwere m ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe ọkachamara na ụwa nke njem, otu ndị m na-agụ akwụkwọ ma na-eleta ebe ndị dị egwu gburugburu ụwa.
Degree na Spanish Philology si Mahadum Oviedo. Obi ọmịiko banyere njem na ide banyere ahụmịhe mara mma ha na-ewetara anyị. Ihe ndị a niile iji kesaa ha na onye ọ bụla nwere ozi dị mkpa gbasara ebe kachasị mma na ụwa anyị. Yabụ mgbe ị gara ileta ha, ị ga-enweta nduzi zuru oke na ihe ị na-agaghị efu.
Ọ na-amasị m ịme njem, ịmara ebe ndị ọzọ, na-eso igwefoto dị mma na akwụkwọ ndetu mgbe niile. Karịsịa nwere mmasị n'ịga njem na-eme ihe kachasị ego, yana ịchekwa mgbe enwere ike.
Abụ m Bachelor na Prọfesọ na Nkwukọrịta mmekọrịta na m nwere mmasị ịga njem, mụta asụsụ Japanese ma zute ndị si n'akụkụ ụwa niile. Mgbe m na-eme njem m na-eje ije ọtụtụ, na-efu m ebe niile ma m na-anwale ụtọ niile enwere ike, n'ihi na maka m, njem pụtara ịgbanwe omume nke m dịka o kwere mee. Iswa di ebube na ndeputa nke ebe njedebe enweghi ngwụcha, mana ọ bụrụ na enwere ebe m na enweghị ike iru, ana m abata site n’ide.
Ebe ọ bụ na amalitere m ịga njem na kọleji, ọ na-amasị m ịkọ ahụmahụ m iji nyere ndị njem ndị ọzọ aka ịchọta mmụọ maka njem ọzọ na-agaghị echefu echefu. Francis Bacon na-ekwukarị na "njem bụ akụkụ nke agụmakwụkwọ na ntorobịa na akụkụ nke ahụmịhe na agadi" na ohere ọ bụla m nwere ịga njem, ekwenyere m karịa n'okwu ya. Ga njem na-emepe uche ma na-azụ mmụọ. Ọ na-arọ nrọ, ọ na-amụ ihe, ọ na-ebi ndụ ahụmahụ pụrụ iche. Ọ na-eche na ọ dịghị ala ọzọ ma na-ele ụwa anya mgbe niile na oge ọhụụ. Ọ bụ njem nke malitere na nke mbụ ma ọ bụ ịghọta na njem kachasị mma nke ndụ gị ka ga-abịa.